Etu ị ga-azụta ndị otu mgbagha kwesịrị ekwesị maka gị | Trivoshop
Share on Facebook Tweet na Twitter Share on LinkedIn Ntụtụ Pinterest
Julaị 3, 2019 Ali Nyocha
Etu ị ga-azụta ndị otu egwu kwesiri ekwesi maka gị
Egwuregwu ndị na-eguzogide hà na ọtụtụ igwe, mana ha dị oke arọ, kọmpat, na obere. Ọ bụrụ n'ịchọrọ inweta mgbatị dị irè mgbe ị na-ejegharị otu ndị na-eguzogide bụ nhọrọ zuru oke.
Ọbụlagodi na ị bụ onye dara ụda na ị na-ezere iji ndị agha n'ihi na ị kwenyere na ha abaghị uru ma ọ bụ ma eleghị anya ị maghị ihe ị ga-eme ha ugbu a bụ oge dị mma iji nwalee ihe dị iche.
Gịnị Mere I Ji Kwesị Trygbalị Bandgba Nguzogide?
Iji meziwanye nguzozi gi na nhazi gi.
N'oge a na-eji bandị eme ihe, ị ga-enwe ahụ erughị ala nke ga-amanye gị ime ka ahụ gị kwụsie ike. Mmeghari ndị a gụnyere otu ahụ ike dị iche iche karịa ọzụzụ ọzụzụ oge niile na-abawanye ogo na nhazi gị.
Iji maa ahu gi aka.
Ọtụtụ mgbe igwe nwere ike ịnwe oke ma a bịa n'omume ole ị nwere ike ịme, mana site na ndị agha na-eguzogide, ị nwere ike ịbụ ihe okike ịchọrọ. Ha na-enye gị ohere igbanwe ọnọdụ gị n'ọtụtụ ụzọ na-arụ ọrụ mọzụlụ ị maghịdị na ọ dị.
Iji mee ka ahụike gị dịkwuo elu.
Akụkụ ndị na-egbuke egbuke bụ na ha adabara ọ bụghị naanị maka ndị mbido kamakwa maka ndị na-emega ahụ. Nwere ike iji otu egwu ahụ maka isi ihe na mgbatị kpụ ọkụ n'ọnụ.
Ndụmọdụ maka yingzụta Otu Ndị Nguzogide
Nwee ihe karịrị otu.
Ọtụtụ ndị agha nwere agba dị iche iche iji mee ka esemokwu dị iche. Nwere ike ịhọrọ si ìhè, ọkara, arọ, ma ọ bụ mmezi arọ. Ihe kachasị mma ga-abụ ịnwe ìgwè ma ọ dịkarịa ala nha atọ dị iche iche dị iche iche dị iche iche akwara chọrọ ọkwa dị iche iche nke nguzogide. Ọtụtụ ndị na-emega ahụ na-ahọrọ Rep Band Mmega Band dị ka e nwere ọkwa anọ dị iche iche ha nwere ike ịhọrọ.
Bands ndị dị mfe iburu.
Bandfọdụ ìgwè nwere aka, ha zuru oke maka mmega ahụ. Ihe ngwugwu ahu gunyere ma ọ dịkarịa ala ìgwè abụọ dị iche iche na ejiri aka na-agbanwe agbanwe. Ọ bụrụ n ’ị zụrụ ụdọ ejiri aka mee nkịrịka, ha ga-ewere ọtụtụ ohere karịa n’akpa gị, ọ ga-esikwa ike ibu ha.
Malite na nke kachasị mfe.
Iji bido, họrọ eriri ogologo nke nwere ogologo aka. Ozugbo ịchọpụta otu esi eji ya, ịnwere ike ịzụta ụdọ ndị ọzọ ma emechaa maka iche iche.
Otu uru dị ukwuu n'iji ndị agha eme ihe bụ inwe ụzọ dị iche iche iji tinye ha. You nwere ike ịgafe ha, kee ha agbụ, ma ọ bụ jiri ngwa dịka mgbakwunye ọnụ ụzọ mepụta mmemme dị iche iche. Nwere ike ịzụta nkwonkwo ụkwụ, aka dị iche iche, na ngwa ndị ọzọ.
Ga-ahụ na e nwere ọtụtụ ndị agha na-eguzogide dị na ọtụtụ ụlọ ahịa egwuregwu. Nwere ike ịzụta ụsụụ ndị na-eguzogide ọgwụ na ụlọ ahịa anụ ahụ, mana ọ bụrụ na ị na-achọkwu nhọrọ na ngwa yana, mgbe ụfọdụ, mma ka mma, ị nwere ike ịchọpụta na ị ga nye ha iwu na ntaneti.
Ọzụzụ na ndị agha na-eguzogide zuru oke maka onye ọ bụla n'agbanyeghị afọ ole na ogo ọrụ. Iji nweta ọtụtụ ihe na omume gị, zụta nha ziri ezi na ụdị mmachi. Enwere ike iji bandị maka ọgwụgwọ anụ ahụ ma ọ bụ nrụzigharị, mana anyị na-atụ aro ka ị gakwuru onye ọkachamara ahụike ma ọ bụ dọkịta maka nduzi a kapịrị ọnụ.
Gbanyere na: mma, ndị na-eguzogide ndị agha, yoga
Chevron ala akara ngosi Previous isiokwu Tingcha Edge Technology maka IT na gafere
isiokwu na-esonụ Ngwá Ọrụ Kachasị Mma Maka Homelọ Gị Chevron ala akara ngosi